Nguva Yako Yemberi Inogadzwa Nejambwa Here? — RAIBHURARI YEPAINDANETI yeWatchtower
Madonzo aMwari Nokuda Kwenguva Yemberi
Kuwana Nguva Yemberi Yako Umene
KUDAI waizopukunyuka tsaona inouraya, waizorangarira kuti wakanga wadiwa nejambwa here? Kana kuti panzvimbo pezvo waizoonga kuti waingovawo zvako munzvimbo yakarurama panguva yakarurama here?
Murume akachenjera Soromoni akati: “Ndakadzoka, ndikaona pasi pezuva, kuti unomhanyisa haazi iye unokunda, une simba haazi iye unokunda pakurwa, wakachenjera haazi iye une zvokudya, vanhu vane njere havazi ivo vane fuma, vanhu vane umhizha havazi ivo vanofarirwa; asi vanowirwa vose nenguva nezvinoitika.” (Muparidzi 9:11) Chisingakarirwi chinoitika kazhinji sei! Mumhanyi anodiwa anokuvadzwa, uye akaderera anohwina. Tsaona isati iri yenguva dzose inounza kuvadziko yezvemari kumunhu ane bhizimisi akatendeseka, ichibvumira mukwikwidzi wake asina kutendeseka kupfuma. Asi Soromoni akati zvinhu zvisati zviri zvenguva dzose izvozvi zvinoparirwa nejambwa here? Nyangwe. Iyoyi inongovawo zvayo miuyo ye“nguva nezvinoitika.”
Jesu Kristu akataura zvakafanana. Achinongedzera kuchinoitika icho sezviri pachena chakanga chichizivikanwa navose pakati pavateereri vake, Jesu akabvunza, kuti: “Kana vaya vane gumi navasere, vakawirwa nesvingo yeSiroami, ikavauraya, munoti vakanga vane mhosva kukunda vanhu vose vaigara Jerusarema here?” (Ruka 13:4) Jesu haana kupomera idzi tsaona dzinouraya pajambwa rakavanzika rakati kana kuti pakuda kwaMwari, uyewo haana kudavira kuti vanyajambwa vakanga vane mhaka zvikuru kupfuura vamwe. Tsaona ine ngwavaira yakanga iri bedzi mumwe muenzaniso wenguva nechinoitika zvisingadeyi kuonekwa zvichishanda.
Bhaibheri hapana parinotsigira mufungo wokuti Mwari akatema pachine nguva mberi nguva yedu yorufu. Ndokwechokwadi kuti Muparidzi 3:1, 2 inoti: “Chinhu chimwe nechimwe chine musi wacho, uye shoko rimwe nerimwe pasi pedenga rine nguva yaro: nguva yokuberekwa, nenguva yokufa; nguva yokusima, nenguva yokudzura chakasimwa.” Bva Soromoni akanga achingokurukurawo zvake kutenderera kunopfuurira kwoupenyu norufu kunotambudza vanhu vasina kukwana. Tinoberekwa, uye apo nguva inosvika, apo nduramo yenguva dzose inosvikwa—kazhinji kazhinji pashure pamakore 70 kana kuti 80 kana kuti kupfuura—tinofa. Zvisinei, nguva chaiyo yorufu haina kutemwa pachine nguva mberi naMwari zvikuru kupfuura nguva apo murimi anosarudza “kusima” kana kuti “kudzura chakasimwa.”
Kutaura idi, Soromoni gare gare anoratidza kuti munhu angafa nguva isati yasvika, achiti: “Usava munhu wakaisvoipa, uye usava benzi; uchafireiko nguva yako isati yasvika?” (Muparidzi 7:17) Zano irori raizova nomufungoi kudai nguva yomunhu yorufu yakasarudzwa pachine nguva mberi yakanga isingachinjiki? Bhaibheri nokudaro rinoramba mufungo wejambwa. VaIsraeri vakawa pakutenda avo vakagamuchira uyu mufungo wechihedheni vakashurikidzwa zvakakomba naMwari. Isaya 65:11 inoti: “Asi imi munosiya Jehovha, nokukanganwa gomo rangu dzvene, imi munogadzirira Gadhi tafura, nokudirira Meni waini yakavhenganiswa.”
Ufuza hwakadini, ipapoka, kutaura kuti tsaona kana kuti njodzi zvinoparirwa nejambwa kana kuti, zvakatoipa zvikuru, naMwari amene! “Mwari rudo,” rinodaro Bhaibheri, uye kumupomera kuti ndiye manyuko orusuruvaro rwavanhu kunopokanidza zvakananga zvokwadi huru iyoyi.—1 Johane 4:8.
Zvakadiniko, kunyanguvezvo, nezvekariro dzedu dzoruponeso? Idi rokuti hakuna jambwa risingadzivisiki rinodzora upenyu hwedu rinoreva kuti tinofanira kufamba zvisina donzo here? Nyangwe, nokuti Mwari akasarudza nguva yemberi yorudzi rwomunhu rwose zvarwo. Bhaibheri rinotaura nezvokusikwa kwe“pasi idzva” umo “kururama kuchagara.”—2 Petro 3:13, NW.
Kuti aite ikoku, Mwari achapindira zvakananga muzvinhu zvavanhu. Usingazivi, ungave wakanyengeterera kuti ikoku kuitike kupfurikidza nokudzokorora munyengetero uyo unoti: “Umambo hwenyu ngahuuye. Kuda kwenyu ngakuitike, somudenga, pasi panowo.” (Mateo 6:10, NW) Umambo ihwohwu ihurumende chaiyoiyo yakagadzwa mumatenga. Kupfurikidza nokuhunyengeterera kuti huuye, unonyengeterera Umambo ihwohwo kuti hudzore pasi kubva muhurumende dzomuzuva razvino.—Dhanieri 2:44.
Kuti zvinoitika izvozvi zvinoshamisa zvichatapura sei nguva yako yemberi kunotsamira, kwete pajambwa kana kuti kunyange panguva nezvinoitika zvisingadeyi kuonekwa, asi panzira yaunosarudza kutevera. Yeuka ngwavaira iya yeshongwe yeSiroami. Jesu akashandisa chinoitika chinosuruvarisa ichocho kuti adzidzise chidzidzo chikuru. Vanyajambwa vokuwa kweshongwe ikoko havana kukwanisa kunzvenga chakavawira. Pane rumwe rutivi, vateereri vaJesu vaigona kudzivisa ruparadziko rwakabva mukusafarirwa kwoumwari. Jesu akavanyevera, kuti: “Asi kana musingatendeuki, imi mose muchaurawa saizvozvo.” (Ruka 13:4, 5) Nenzira yakajeka, vaigona kusarudza nguva yemberi yavo vamene.
Banza rimwe chetero rinotambanudzirwa kwatiri nhasi—kuita ruponeso rwedu timene. (VaFiripi 2:12) Mwari anoshuva kuti “vanhu vose . . . vasvike pakuziva zvokwadi.” (1 Timotio 2:4) Uye kunyange zvazvo mumwe nomumwe wedu achitapurwa kusvikira kutambanuko yakati kupfurikidza nokugara nhaka uye mugariro, Mwari akatipa rusununguko rwokuita chatinoda—simba rokusarudza nzira yatinoda kushandisa nayo upenyu hwedu. (Mateo 7:13, 14) Tinogona kuita chiri chakarurama kana kuti chiri chisina kururama. Tinogona kuwana chimiro chakanaka naJehovha Mwari ndokuwana upenyu, kana kuti tinogona kumupandukira ndokufa.
Vazhinji vanosarudza kurarama vakazvimirira pana Mwari. Vanopa upenyu hwavo kukurondwa kwezvinhu zvokunyama, mufarwa, kana kuti mbiri. Asi Jesu akanyevera, kuti: “Chenjerai, muzvichengete pakuchiva kwose, nokuti upenyu hwomunhu hahuzi pazvinhu zvakawanda zvaanazvo.” (Ruka 12:15) Ipapoka, upenyu hwedu hunotsamira pachii? Pana 1 Johane 2:15-17, Bhaibheri rinotsanangura, kuti: “Musada nyika kunyange nezvinhu zviri munyika. . . . Zvose zviri munyika, zvinoti kuchiva kwenyama, nokuchiva kwameso, nokuzvikudza kwoupenyu, hazvibvi kuna Baba, asi panyika. Nyika inopfuura nokuchiva kwayo; asi unoita kuda kwaMwari, unogara nokusingaperi.”
Unogona sei kuva nechokwadi chokuti uri kuita zvirokwazvo kuda kwaMwari? Jesu akazivisa, kuti: “Ikoku kunoreva upenyu husingaperi, kupinza kwavo zivo yenyu, Mwari bedzi wechokwadi, uye youyo wamakatuma, Jesu Kristu.” (Johane 17:3, NW) Zivo yakarurama inobva muBhaibheri inogovera hwaro hwokutenda. “Pasina kutenda hazvibviri kusanomufadza, nokuti iye anosvika Mwari anofanira kudavira kuti iye aripo uye kuti anova mutusi waavo vanomutsvaka zvapachokwadi.” (VaHebheru 11:6, NW) Zivo yaunofanira kuwana inowanikwa nyore nyore. Zvapupu zvaJehovha zvakabetsera mamirioni kuiwana kupfurikidza nefundo yenguva dzose yeBhaibheri.*
Kuti ufadze Mwari, uchafanira kuita chinjo dzakati. Kungava netsika dzakati dzakashata dzinofanira kukurirwa kana kuti kunyange miitiro youtere inofanira kugumiswa. Usaneta, sokunge kusingabviri kuti uchinje. Pfungwa yokuti zvinhu hazvigoni kuchinja ndiimwe ipfungwawo zvayo yakawanwa mudzidziso yenhema yechitendero mujambwa. Nebetsero yaJehovha, kunobvirira munhu upi noupi ku‘shandura ndangariro yake’ uye kuwana “hunhu hutsva.” (VaRoma 12:2; VaEfeso 4:22-24, NW) Nhamburiko dzako dzokufadza Mwari hadzisati dzichizorega kucherechedzwa. Iye akagadzirira kukomborera avo vanoita kuda kwake.
Sezvinobvumwa, kudzidza Bhaibheri hakusati kuchizopedza zvinetso zvako zvose. Vabatiri vechokwadi vaMwari vanosangana netsaona nemigariro yakaipa, sezvinoita vamwe. Zvisinei, Mwari anogona kutipa uchenjeri hwokugonana nenhamo. (Jakobho 1:5) Kunewo mufaro wokuziva kuti mumwe ane ukama hwakanaka naMwari. “Anofara uyo anovimba naJehovha,” inodaro Zvirevo 16:20, NW.
MuParadhiso ichadzorerwa muUmambo hwaMwari, hatisati tichizonzwazve tichityisidzirwa nenguva nechinoitika zvisingadeyi kuonekwa. Zvamazvirokwazvo, Mwari achabvisa zvinhu zvose izvo panguva ino zvinoshatisa mufarwa wavanhu. “Iye achapukuta musodzi uri wose mumeso [edu], uye rufu harusati ruchizovapozve, uyewo kuchema kana kurira uyewo kurwadziwa hazvisati zvichizovapozve,” rinopikira kudaro Bhaibheri. (Zvakazarurwa 21:4, NW) Vanyajambwa vasingaverengeki vetsaona vachawana rumuko.—Johane 5:28, 29.
Uchagara nhaka nguva yemberi ine mbiri iyoyi here? Apo vaIsraeri vakanga vava kudokupinda muNyika Yakapikirwa, Mosesi akavaudza, kuti: “Ndaisa pamberi pako upenyu norufu, kuropafadzwa nokutukwa; naizvozvo tsaura upenyu, kuti urarame, iwe navana vako; kuti ude Jehovha Mwari wako, nokuteerera inzwi rake, nokumunamatira; nokuti ndihwo upenyu hwako, nokuwanzwa kwamazuva ako.”—Dheuteronomio 30:19, 20.
Aiwa, hatisi vashandiswi vasingabetseri vari muudzori hwejambwa risina ngoni. Mufarwa wako wenguva yemberi, zvamazvirokwazvo nguva yako yemberi isingagumi, iri muudzori hwako. Tinokukurudzira kusarudza upenyu.
Fundo yakadaro inogona kurongwa kupfurikidza nokunyorera vabudisi vemagazini ino.
VaIsraeri vakawa pakutenda avo vakagamuchira mufungo wechihedheni wejambwa vakashurikidzwa zvakakomba naMwari